Ulawulo lomgangatho-iSekonic Metals Technology Co., Ltd.
I-Sekoin Metal njenge-ISO9001: i-2000 yomenzi oqinisekisiweyo, siye saguqula inkqubo eqinisekileyo nesebenzayo yokuqinisekisa umgangatho. Lonke inyathelo lemveliso Ukusuka kwi-Raw Material Melting ukuya kwi-Precision Mahcining igqityiwe, silawula yonke inkqubo ngononophelo.
Ukuhlolwa okungaqhelekanga kuya kuthathwa ngexesha nasemva kwemveliso. Amaqela anamava, inkqubo yolawulo olusebenzayo, iindlela eziphambili kunye nezixhobo zokuvelisa ziqinisekisa ukubonelelwa okuzinzileyo kweemveliso ezilungileyo nezithembakeleyo.
Isebe lomgangatho ngamnye kunye neziko lovavanyo lasekwa ngo-2010. Izixhobo zovavanyo zikarhulumente kunye nabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle baphethe ulawulo lomgangatho. Banamava atyebileyo kwaye banoxanduva lolawulo kunye novavanyo lokuqhubekeka kwezinto ezivela kwimveliso eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo.
Izixhobo zokuHlola kuQinisekiso loMgangatho
Isixhobo sovavanyo lweSpectroanalysis
Uvavanyo lweTenslie kunye namandla oVavanyo
Umphezulu wokuhlola okubonakalayo
Uhlalutyo lweCarbon Sulphur
Ukufunyanwa kwesiphene se-Ultrasonic
Uvavanyo lokungena kwedayi
Eddy Izixhobo zoVavanyo lwangoku
Umatshini we-CNC Bolt
Izixhobo zovavanyo lwe-Hydrostatic
Ukuhlolwa kweqela lesithathu:
Ukuhlolwa kweqela lesithathu kunokubonelelwa ngokwemfuno zabathengi. Sizimisele ukuvavanya umgangatho wethu kwiziko elinamandla lokuHlola iiMetro ezingezoNtsimbi kunye noVavanyo e-China ukusukela ngo-2010. Igama leziko liyi: IZiko loPhando Jikelele laseShanghai loHlalutyo lweZinyithi kunye neZiko loVavanyo. Liziko elisebenza ngurhulumente, kunye nelona ziko lilungileyo lokuhlalutya kunye nokuvavanya isinyithi. Okwangoku, i-SGS, TUV, iimvavanyo zelebhu ziyafumaneka.
Isitayile 6, Yenza ingxubevange R26 evulwa, IHaynes 25 Intambo, iringi yesitayile, Ucingo lweWelding, Isitayile 6B,